Warraaqsa M-PESA: Maallaqa keessan Moobaayilii keessaniin - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Moobayiilii fayyadamuun qarshii walii dabarsuu
Bara 2009, miseensonni Poolisii Afgaanistaan shantama ta'an ergaa karaa moobaayilii isaanii ergameef yoo argan dogoggorri tokko uumamuu shakkan.
Mindaan isaanii baatii sanaa, tajaajila miindaa karaa moobaayiliin kafaluu M-Payisaa jedhamuun akka isaaniif kafalamu gurraa qabu. Haa ta'u malee, qarshiin baatii kana isaaniif ergame kan durii waan caaleefi dogoggorri wayii uumamuu kan shakkan.
Ta'us hammi qarshi ergameef sirrii ture. Kanaan duras hammana argachuutu isaanirra ture. Garuu mindaan isaanii harkatti kennamaaf waan tureef adeemsa keessa miindaan isaanii dhibbeentaan 30'ni dhadhaa abidda buute jalaa ta'aa ture.
Jijjiirama kanaan Polisoonni mindaa isaanii guutuu argachuu eegalan fuulli yoo ifu, hammi isaan irraa kutataa turan kan jalaa hafe hoggantoonni isaanii fuulli gurraacha'e.
Afgaanistaan biyyoota guddataa jiran, tajaajila maallaqaa moobaayiliin daddabarsuu hojiirra oolchuun jijjiirama diinagdee guddaa mul'isan keessaa ishee tokko.
Teeknooloojii kana jalqaba kan hojiirra oolchite garuu Keenyaa dha. Yaanni ka'uumsaa kubaaniyyaa Vodafon jedhamuuf kan hojjetu namicha Niik Haafsiin, Yaa'ii Addunyaa Misooma itti fufaa, Afriikaa Kibbaatti taa'amerratti dhiyaate.
Goodayyaa suuraa Yaa'ii Addunyaa Misooma itti fufaa, Afriikaa Kibbaa bara 2002
Yaadni isaa qorannoowwan rakkoo biyyoota guddataa jiranii furuu danda'an jedhamanii yaadaman, garuu balaa qabaachuu malan, Kubaaniyyootni gurguddoo maallaqaan akka deeggaran jajjabeessuu ture.
Yaa'ii kana irratti qondaalli Muummee misooma idil-addunyaa (DFID) UK tokko hirmaachaa turan.
Dhaabni isaanii DFID'n raakkoo daddabarsa maallaqaa furuuf fandii ramade qaba ture.
Moobaayili maallaqa daddabarsuuf
Mala ittiin rakkoo kana furan wayita yaadan moobaayiliin filannoo isa duraa ta'ee argame. Doolaara miliyoona tokko DFID'n ramadeenis yaaliin tajaajila maallaqa moobaayiliin daddabarsuu Keenyaa keessatti eegale.
Tajaajilichi jalqaba osoo gara baankii hin deemiin liqii xixiqqaa argachuu fi deebisanii kafaluu irratti xiyyeeffata ture.
Turtii keessa fayyadamtoonni sagantaa yaalii kana jalatti hammataman, firoota isaaniitiif maallaqa erguu, bakkuma jiranii kaffaltii raawwachuu fi tajaajilawwan kanneen biroof itti fayyadamuu eegalan.
Suuqiiwwan xixiqqoon akka damee baankiitti tajaajiluu eegalan.
Maallaqa erguu fi fudhachuu, qusachuu, bittaa fi gurgurtaa raawwachuuf fi tajaajilawwan biroof wanti isin barbaachisu moobaayilii qofa ta'e. Intarneetiin isin hin barbaachisu.
Baatiiwwan saddeet keessatti, lammiileen Keenyaa miliyoona tokko ta'an tajaajila kanatti fayyadamuuf galmaa'an. Waggoota lama keessatti, maallaqni omisha waliigalaa biyya keessaa yookin GDP biyyattii dhibbeentaa 10 M-PESA'n daddabarfamuu eegale.
Goodayyaa suuraa Harki 50ni GDP Keenyaa M-PESAdhan socho'a.
Har'as lammiileen biyyattii miliyoona 20 ta'an maallaqa daddabarsuufis ta'e bittaa fi gurgurtaadhaaf M-PESAtti kan fayyadaman yoo ta'u, harki 50 GDP biyyattii kanumaan socho'a.
Wayita amma suuqiiwwan xixiqqoo akka damee M-PESAtti tajaajilan, maashiniiwwan ATM biyyattii keessa jiran dachaa 100n caalu.
Salphaadhumatti bifa ergaa gabaabaan maallaqa walii dabarsuu danda'uun alatti, sababoonni gurguddoo lama milkaa'ina M-PESAf gumaachanii jiru.
Tokko, malaammaltummaa ittisuudha. Fakkeenyaaf, Kaffaltiin hundi moobaayiliin waan raawwatamuufi, lakkoofsi moobaayilii namootaa waan galmaa'uuf Poolisoonni Tiraafikaa konkolaachiftoota irraa matta'aa fudhachuu hin danda'an.
Goodayyaa suuraa Kaffaltii Moobayiliin raawwachuun ega eegalee rakkoon konkolachiftootarra gahaa ture hir'ateera.
Duraan konkolaachiftoonni taaksii Keenyaa (Mataatuu) galii guyyaa isaanii keessaa harka 1/3ffaa hannaa fi saamichaan akka dhaban himama.
Lammeessoo, gibira funaanuuf. Kaffaltiin moobaayiliin raawwatamu waan galmaa'uuf galii daldaltoonni argatan baruun salphaa dha. Kun ammoo gibira galii isaaniin wal madaalu akka kafalan dirqamsiisuuf gargaara.
M-PESA'n afaan Swahiiliin qarshii jechuu yoo ta'u, Itiyoophiyaa keessattis M-BIRR dabalatee kubbaaniyoonni biroo tajaajila wal fakkaataa kennuu eegalanii jiru.